“Ragga qurbaha ayaa guurkii qaali iyo macno la’aan ka dhigay” | shumis.net
Home » Layaab » “Ragga qurbaha ayaa guurkii qaali iyo macno la’aan ka dhigay”
“Ragga qurbaha ayaa guurkii qaali iyo macno la’aan ka dhigay”
“Hablo badan ee dalka waxay u arkaan ragga Qurbaha ka yimid inay yihin dadka ugu wanaagsan oo kaliyaa la guursan karo si dhoof loo helo. Wakhtigii aan guursanayey, guurka wuxuu ahaa mid sharaf leh, waxay ahayd saldhig lagu abuuro guri barwaaqo. Lacagta badan laguma xidhi jirin oo waxaa la eegi jiray, gurigaan inu abuuro qoys cusub oo farxaad ku nolaada. Ninkana inuu yahay mid karti badan oo ragga kala garab socon kara.
Waxayaabaha kale ee aan qiimayn jirin waxaa ka mid ahaa gabadhu guriga ay dagayso oo hadii uu reerkooda dhex gaynayo ama qol yar uu gaynayo qiimo lama siin jirin oo heblaayo waa la guursaday ayaa anaga sharaf noo ahayd. Laakin hadda waxaas oo dhan waa laga tagay oo dan baa laysku guursadaa. Gabadhu hadii aay dhoof rabto ninka waxay uu guursanaysaa inay dhoof ka hesho wiilkuna waa saas, waxaaabaha guurkii qiimo tiray bay kamid tahay oo hada hadaad uu fiirsado in badan gabdhaheena waddanka jooga waxay aaminsan yihiin ragga dibadda jooga ee laga yaabo inuuna shaqayn ama waxba gacanta ku hayn laakiin kan waxbartay shaqaysta ninba uma haysato.
Dhibaatada kale ee jirta guurka waa lacagta faraha badan ee lagu bixinayo. Waxaan mar ka qeybgalay aroos lagu bixiyey $30,000. Ragga magaaladda degena niyad jab baa ku dhacay. Wiilkii wax haystay oo markay gabadhii meel adag uu istaagto wiilkii wuu iska daynayaa guurba. Markaas bey tahriibaan oo naftooda qatar galiyaan, ayagoo suurtagal u arkin iney dhulkooda hooyo ku guursadaan.”
Burco, wareysigaan waxaa lagu daabacay bogga Somali Faces
Title: “Ragga qurbaha ayaa guurkii qaali iyo macno la’aan ka dhigay”
Posted by Unknown, Published at May 18, 2016 and have 0 comments